Happy Holidays! နားရက်အခါကြီးမှာသာယာရွှင်လန်းကြပါစေ၊ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Cultures » Happy Holidays! နားရက်အခါကြီးမှာသာယာရွှင်လန်းကြပါစေ၊
Happy Holidays! နားရက်အခါကြီးမှာသာယာရွှင်လန်းကြပါစေ၊
Posted by Kyaemon on Dec 29, 2012 in Cultures, Education, Entertainment, Music, Photography, Society & Lifestyle, Style & Beauty, Travel | 12 comments
Christmas Christmas boat parade Christmas displays CHRISTMAS SONGS Holidays
Shakin’ Stevens – Merry Christmas Everyone – YouTube
( ကျန်ဓာတ်ပုံတွေကြည့်ဘို့ linkလင့်ခတွေကိုနှိပ်ပါ)
ကားကိုအအလှဆင်ထားတဲ့မီးသီးလေးအချို့ကြွမ်းသွားတာကိုLos Angeles နေAdrian Leissနဲ့သမီးတို့ကပြန်လဲအစားထိုးနေတာပါ
Lebanan, Beirut မြို့လယ်ရှိဗလီရှေ့မှာခရစ်စမတ်သစ်ပင်ဆင်ထားတာ
Ivory Coast, Abidjan မြို့ကလမ်းတွေမှာခရစ်စမတ်မီးထွန်းပြီးအလှဆင်ထားတာ
Christmas Time Around The World – In Focus – The Atlantic
( ကျန်ဓာတ်ပုံတွေကြည့်ဘို့link လင့်ခတွေကိုနှိပ်ပါ)
World celebrates Christmas – Xinhua | English.news.cn
Christmas 2012: Share Photos Of Your Holiday Lights Display For A Chance To Win A Gift Card From The Home Depot (PHOTOS)
The big day is finally here! And while we’ve been getting our gifts in order and cooking upastorm, we’re most looking forward to being with our families and admiring our gorgeous Christmas lights. OK, maybe we’re actingalittle like Clark Griswold from “National Lampoon’s Christmas Vacation,”but we’d like to see your holiday displays too!
If you’ve decked out your home, uploadaphoto of your outdoor lights to Instagram or Twitter using the hashtag #ShowUsYourLights and the best and brightest will wina$50 or evena$100 Gift Card to The Home Depot. Contestants have until midnight on January 1st to enter (click here for complete entry details).
Enjoy the snaps below from users and from everyone here at HuffPost Home, haveavery Merry Christmas!
Newport Beach Christmas Boat Parade 2012
ဒီလိုလေး အမည်ပေးလိုက်ချင်ပါသေးတယ် ….။
“လျှပ်စစ် မီးရောင်စုံများနဲ့ ခရစ်စမတ်” … ပေါ့ ခင်ဗျာ …။
ဆုတောင်းပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ ….။
ခင်ဗျားလည်း ဒီဆုတောင်းတွေအတိုင်း ပြန်လည် ရရှိနိုင်ပါစေလို့ ….။
Kyaemon ဆိုတဲ့အမည်ကို သူများပို့စ်တွေမှာ မတွေ့ဖူးသလို …
ကိုယ့်ပို့စ်ကို Comment ပြန်ပေးတယ် ဆိုတာလည်း မတွေ့ဖူးပါဘူး ….။
အဲ့ဒါ ဘာဖြစ်လို့လဲ ခင်ဗျ ….။
သဘောင်္မှာ Happy Holiday လို့ ရေးထားတဲ့ ပုံလေးကြည့်ပြီး အလိုလိုနေရင်း ပျော်သွားတယ်။ :hee:
ကြေးမုံကြီးလဲ နှစ်သစ်မှာ အစစအရာရာ အားလုံး အဆင်ပြေ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ
Kyaemon ဆိုတဲ့အမည်ကို သူများပို့စ်တွေမှာ မတွေ့ဖူးသလို …”
“…ကိုယ့်ပို့စ်ကို Comment ပြန်ပေးတယ် ဆိုတာလည်း မတွေ့ဖူးပါဘူး ….”
ကွန်မန့်ပေါင်း ၈၀၀ ကျော် ၉၀၀ ဝန်းကျင်လောက်တောင် ရှိနေမှပဲ …။
ကျုပ် မေးရတာက ဒီလိုပါ ….။
ကျုပ် ဂဇက်ကို စဝင်ကတည်းက ခုချိန်ထိ ခင်ဗျားရဲ့ ကွန်မန့်တွေကို
မတွေ့မိသလိုမျိုး ဖြစ်နေလို့မို့ ကြုံတုန်းလေး မေးကြည့်ရတာပါ ခင်ဗျာ …။
ခုလို ပြန်လည်ပြီး ပြောပြပေးတာ ကျေးဇူးပါနော့ ….။
အမှတ်မမှားရင်.. Kyaemon က.. မန္တလေးဂဇက်ရဲ့.. ဟိုးးး အရင်ဖိုရမ်တွေရှိကတည်းက.. ရှိခဲ့သူပါပဲ..။
မန်းဂဇက်မဖြစ်ခင်.. သက္ကရာဇ်၂၀၀၀ က.. yadannar.com ခေတ်မှာကတည်းက.. ရှိများနေသလားမသိ..။
Yadanar.com မှာ.. မန်င်ဘာ၁သောင်းကျော်ရှိခဲ့ဖူးတယ်..
ရတနာပုံတယ်လီပို့တ်ရဲ့ရှေ့.. ပုဂံဆိုင်ဘာတက်ခ်ရဲ့ရှေ့.. မြန်မာပြည်မှာပထမဆုံးအင်တာနက်.. မရှိခင်ကတည်းကရှိခဲ့တဲ့.. ၀က်ဘ်ဆိုက်ပါ…။
အခုဘလော့ဂ်ဂါတွေတော်တော်များများ.. Yadanar.com မန်င်ဘာတွေဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်..။
ဒီစိုင်းပုံ ပန်းချီလဲ ပါတတ်တာပါ၊
ကြည့်ရတာ အားရပါးရပဲ ပုံတွေကအကြီးကြီးတွေဆိုတော့
ကျေးဇူးပါ ကြေးမုံ ရေ
နှစ်သစ်မှာ ကြောင်အသစ်နဲ့ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ..
မှုံဂျီးကို ထိနဲ့ကွ.. မှုံဂျီးဆိုတာ ကြေးမုံဂျီး ခြစ်စနိုးခေါ်တာ.. အခြားဘယ်ကောင်မှ ခေါ်ခွင့်မရှိ။
ကြေးမုံဂျီးလည်း နှစ်သစ်မှာ စိတ်သစ် လူသစ်နဲ့ မြစ်ဆုံ၊ ဝမ်ပေါင် တို့လို မဟုတ်တရုတ် စီမံကိန်းအသစ်တွေ ရပြီး ယူအက်စ်နဲ့ ယူရုတ်ပ်ကို အကြွေးနဲ့သိမ်းမယ်လို့ နွေခေါင်ခေါင် နေ့လည်အိမ်မက် အသစ်ထပ် မက်နိုင်စေဂျောင်း ဆုတောင်းပါတယ်။
ဒါနဲ့ ဟောသည်မှာ …..http://www.thithtoolwin.com/2013/01/blog-post_3707.html?utm_source=BP_recent#.UOpIY6D4LFE
နယ်စပ်မှ တရားမဝင် တင်သွင်း လာသော ကုန်စည် များတွင် တရုတ် နိုင်ငံထုတ် စားသောက်ကုန် ပစ္စည်းများမှာ အများဆုံး ဖြစ်ကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး ဦးစီးဌာန ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးညွန့်အောင်က ပြောကြားသည်။